येशूले 1 र2थिस्स रिटर्न | Apg29
पहिले नै उहाँले के मण्डलीका आशा र आशाले, अर्&
पहिलो, र्याप्चर एउटा महत्त्वपूर्ण सिक्ने सम्मेलन गरेको जग र प्रचार अभिन्न भाग हुनुपर्छ। यो पनि येशूको देखिने सम्बन्ध मा अलग र विशिष्ट पुन: प्राप्त र आफूलाई आफ्नो मण्डलीको फरफर गर्न स्वर्गबाट ​​उतरती गर्ने प्रभु को एउटा विवरण छ कि पृथ्वीमा आउने र सट्टा एक घटना छ। को र्याप्चर पनि हाम्रो प्रियजनहरूलाई, जो एक साथ र्याप्चर संग मृत देखि एक पुनर्मिलन छ।
संगै 1, कोरिन्थी 15 थिस्सलोनिकीका चर्च पावलले पत्र छ रूपमा, आफ्नो सबै भन्दा राम्रो मा पत्र केही येशूको फिर्ती वर्णन गर्दछ। पत्र जवाफ को र्याप्चर छ के विषयमा समावेश, र यो हुन्छ जब।
यसले हामीलाई अन्त पटक समझ दिनको पावलको दुई पत्र को एक समीक्षा छ, र छ जसले येशू ख्रीष्ट दिन बीचको सम्बन्ध पनि दिन uppryckelsens, र प्रभुको दिन येशूले यस संसारमा लागि न्याय आउन छ। येशूको फिर्ती को स्थिर आशाले बस्न एकै समयमा हामीलाई प्रोत्साहन र हामीलाई बलियो र स्पष्ट प्रतिज्ञा दिने अक्षरहरू परमेश्वरको क्रोधबाट संरक्षित गर्न।
पत्र को पृष्ठभूमि
पावलले यी अक्षरहरू तिनले थिस्सलोनिकीका चर्च स्थापना गरेका थिए पछि धेरै छोटो समय लेखे। आफ्नो दोस्रो मिसनरी यात्रामा पावल जहाँ एक चर्च स्थापित भएको थियो शहर, आए (प्रेरित 17: 1)।
किनभने सुसमाचार प्रतिरोध को हुन्छ पावलले भाग्न थियो, र उहाँले तिमोथी द्वारा उहाँले आफ्नो लगनशील भई लागिरहेमा, विश्वास र प्रेम सुनेका छ जब मण्डलीको प्रोत्साहन पत्र लेख्छन्।
र्याप्चर - एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त
धेरै मानिसहरू एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त वा शिक्षालाई रूपमा र्याप्चर खारेज। केही मसीहीहरूले बस यसलाई अस्वीकार वा अर्थ यो मात्र हो कि लाक्षणिक वा metaphorically बुझे गर्न। अरूलाई र्याप्चर बस सही छ भन्ने विश्वास गर्छन्, तर यो यस्तो त्रिएकको वा बप्तिस्मा रूपमा महत्त्वपूर्ण धार्मिक शिक्षाले द्वारा overshadowed छ।
त्यहाँबाट पावलले मण्डलीमा स्थापित र उहाँले यी अक्षरहरू लेख्छन् सम्म, यो बारेमा 6-12 महिना छ। त्यसैले यो एक धेरै जवान मण्डलीलाई पावलले लेख्छन् कि अर्को शब्दमा छ। तर यी मानिसहरू एकदम विश्वासमा नयाँ थिए भने पनि, लुकाइन् वा सिकाउन वा येशूको फिर्ती कुरा गर्न पावलले हटाइएका।
उहाँले मण्डलीको आशा र आशाले, अर्थात् येशू (V 10) को फिर्ती हुन यसलाई उल्लेख हुँदासम्म त पल, पवित्र आत्मा (पद 5) वा सभा पश्चात्ताप (पद 9) को मौलिक शिक्षा उल्लेख जहाँ पहिलो अध्यायमा पहिले नै।
सतावटको समयमा जन्म
थिस्सलोनिकीका चर्च जन्म र आफ्नो विश्वासको लागि निरन्तर सतावट बस्थे थियो। तिनीहरूले येशू र अगमवक्ताहरू दुवै पहिले (v14) अनुभव थियो, यहूदीहरूले नै सतावट अनुभव थियो।
अक्षरहरू विश्वास र प्रभु आफ्नो लगनशील भई लागिरहेमा हिंड्न जारी चर्च गर्न प्रोत्साहन छन्। पीडित ठूलो सतावट समयमा र तिनीहरूले सुसमाचार प्राप्त, र आफ्नो मूर्तिहरू पश्चात्ताप थियो। अब तिनीहरूले प्रभु हस्तान्तरण र एक र साँचो मात्र परमेश्वरको सेवा गरे।
को र्याप्चर के हो?
हामी व्याख्या र र्याप्चर छ वर्णन गर्ने हो भने, धेरै पक्ष र एक उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ को पक्ष हो:
1 थिस्सलोनिकी 4: 16-17 - एक जोर आदेश, प्रधान दूत एक आवाज र परमेश्वरको ट्रम्प, प्रभु आफूलाई स्वर्गबाट ​​धमकना तब लागि। र केवल ख्रीष्टमा मरेका उठ्नेछ। त्यसपछि जीवित छन् र रहनेछन् जो हामी हावा मा प्रभु भेट्न पुगियो गरिनेछ (harpazo) सँगै तिनीहरूलाई बादल मा। र त हामी कहिल्यै प्रभु हुनेछ।
यो बाइबल पद ग्रीक शब्द "harpazo" बाट अनुवाद गरिएको छ देखि शब्द "र्याप्चर" आउँछ "समात्नु हुन।" यो शब्द "harpazo" मात्र NT मा 13 पटक उल्लेख गरिएको छ र मण्डलीको र्याप्चर जडानमा 1 थिस्सलोनिकी4मा मात्र प्रयोग गरिएको छ।
"HARPAZO" (छ-प्याड-zo) ग्रीक छ र "poach" मतलब लिन वा अचानक बुझ्न। Harpazo पालो मा अंग्रेजी शब्द भए जो ल्याटिन शब्द "raptus," भयो "र्याप्चर।" स्वीडेन मा हामी र्याप्चर संग "द र्याप्चर" को अवधारणा अनुवाद गरेका छन्।
यो शब्द प्रयोग गरिन्छ कसरी र यो शब्द को अर्थ हामीलाई अन्तरदृष्टि दिन्छ, र सभा ठाउँ मा उहाँलाई भेट्न प्रभु गर्न पुगियो पाइहाल्छन् क्षण को समझ किनभने NT मा वर्णन गरिएको छ हेर्न रोचक छ। हामी शब्द harpazo दुवै येशू, पावल फिलिप, यूहन्ना जडानमा बप्तिस्मा दिने र येशूले आफ्ना छोराछोरीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको सामना।
2 कोरिन्थी 12:2- मलाई थाहा छैन शरीर वा शरीर बाहिर कि - म चौध वर्ष पहिले तेस्रो स्वर्ग पुगियो थियो (HARPAZO) ख्रीष्टमा एउटा मानिस थाहा छ।
पावलले जहाँ उहाँले परमेश्वरको रहस्यहरुलाई संलग्न भए स्वर्ग पुगियो थियो। पुनरुत्थानको पछि एस्केन्सन वर्णन गर्न नै शब्द HARPAZO पनि प्रकाश मा येशूको प्रयोग गरिन्छ
प्रकाश 12:5- अनि त्यो परमेश्वर र उहाँको सिंहासनमा फलामको scepter सबै जातिका शासन थियो जो एक बच्चा, एक छोरा, जन्म दिए, र उनको बच्चा समात्नु थियो (HARPAZO)।
जन बप्तिस्मा दिने
मत्ती 11:12 - अनि यूहन्नाले बप्तिस्मा दिन देखि स्वर्ग हिंसा गर्न subjected को अब राज्य सम्म, र हिंसा दमन मानिसहरू (HARPAZO) यो।
यूहन्ना जडानमा बप्तिस्मा दिने सेवामा बन शब्द HARPAZO पनि प्रयोग। येशूले जेलमा हुँदा उनले संग (राम्रो) हिंसा र आकाश दमन गर्ने गुंडे जडान यूहन्ना बारेमा प्रतीकात्मक बताइएको छ। शक्ति / शक्ति द्वारा केहि लागू गर्न (शक्ति ENG। अनुवाद गरेर लिनुहोस्) शब्द HARPAZO एक अर्थ छ।
प्रभु आफ्ना मानिसहरूलाई भेला आउँदा उहाँले सभा शक्ति खोसी हुनेछ।
प्रेरित 8:39 - जब तिनीहरूले पानी बाहिर आए टाढा tore (HARPAZO) प्रभु फिलिप र नपुंसकको उहाँलाई कुनै देखे, तर आफ्नो बाटो रमाहट मा जारी।
गाजा गर्न यरूशलेमबाट जान्छ कि सडक तल जान प्रभु द्वारा मार्फत एउटा दूत भनिन्छ गरिएको छ फिलिप भएको थियो। जहाँ फिलिप फिलिप सुसमाचार प्रचार गर्ने एक इथियोपियाली नपुंसकको हिट। जब फिलिप पूर्णतया सुसमाचार प्रचार, आफ्नो मिशन पूरा र नपुंसकको बप्तिस्मा थियो, फिलिप पृथ्वीमा अर्को ठाउँमा प्रभु द्वारा बन्द लगे हुन्छ।
अर्को शब्दमा टाढा समातिए गर्न प्रभु गर्न एक उच्च सेवामा सारियो बन्न, या त पार्थिव वा स्वर्गीय।
कुनै एक तपाईं प्रभुको हातबाट खोसी
यूहन्ना 10: 28-29 - म तिनीहरूलाई अनन्त जीवन दिन्छु र तिनीहरू कहिल्यै नष्ट गर्नेछु, र कुनै एक मेरो हातबाट खोसी हुनेछ (HARPAZO) तिनीहरूलाई। के मेरो पिताले मलाई दिनुभएको छ सबै भन्दा ठूलो हो, र एक खोसी (HARPAZO) तिनीहरूलाई मेरो बुबाको हातबाट।
यो आफ्नो भेडा लागि गोठालो हृदय देखाउँछ कि एउटा अचम्मको खण्डमा छ। उहाँले हामीलाई थाह छ, हामी आफ्नो आवाज सुन्न र उहाँको पछि। उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ कि प्रतिज्ञा कुनै एक आफ्नो हात हामीलाई "खोसी" गर्न सक्षम हुनुपर्छ भन्ने छ। बुबा फेरि चोरी सक्दैन दिनुभएको छ।
यसले हामीलाई मुक्तिको सुरक्षा र केही येशूले परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्ने निश्चितताका दिन्छ। शैतानले वा परिस्थितिमा, अर्को शब्दमा, हामीलाई टाढा उहाँबाट खोसी छैन।
र्याप्चर सम्बन्धित छ
1 थिस्सलोनिकी 4:15 - हामी तिमीहरूलाई प्रभुको वचन द्वारा, जीवित छन् र प्रभुको आउँदै गर्न रहने जो हामी जो भुसुक्क तिनीहरूलाई रोक्न हुँदैन भनेर भन्न
1 थिस्सलोनिकी 1:10 - अनि आउन क्रोध हामीलाई बुझाइएको छ जो परमेश्वरले मृत्युबाट ब्यूँताइनुभएको जसलाई आफ्नो पुत्रलाई स्वर्गबाट, येशूले लागि प्रतीक्षा।
को र्याप्चर को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग को एक यो जसको अर्थ यो सम्बन्धित छ, र केहि तपाईं कुनै पनि समयमा हुन आशा थियो "आसन्न," छ भन्ने छ।
र्याप्चर अर्को शब्दमा, एक अहस्ताक्षरित आउँदै, र त्यहाँ अर्को शब्दमा, को र्याप्चर लिनुअघि हुनेछ भन्ने कुनै भविष्यसूचक संकेत वा सभा यसलाई अघि हुनेछ यो घटना ठाउँ लिन सक्छ कि सजग हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो।
पावलले शब्द प्रयोग "हामी" उहाँले जीवित छन् र मूलतः पहिले नै र्याप्चर पावलको समयमा हुन सक्ने सुझाव जो प्रभु, को आउँदै गर्न रहने ती उल्लेख गर्दा।
याकूब 5: 8 - तिमीहरू पनि टिकाउ हुनुहोस् र प्रभुको आउँदै नजिकै छ लागि, आफ्नो हृदय बलियो
पावलको दिन ट्रयाक प्रभुको फिर्ती नजिक थियो, र उहाँले स्वर्गबाट ​​येशू स्थिर आशाले बस्न मण्डलीको प्रोत्साहन दिन्छ।
हामी जो हामी बाँच्न समय व्याख्या कुरा गर्दा, र हामी प्रभुको फिर्ती अनुभव हुनेछ कि पुस्ता हो भन्ने विश्वास गर्छन्, यो हामी कष्ट भविष्यसूचक वर्ण तुलना किनभने छ। किनभने संकेत हामी प्रभुको दिन आउँदै छ भनेर गर्न सक्नुहुन्छ, र जन्म pangs वृद्धि। अर्को शब्दमा, आन्तरिक र बाह्य संकेत मा जो 70th र वर्ष को अन्तिम हप्ता आउँदै छ पनि मण्डलीको र्याप्चर संकेत, र यसरी।
लागि प्रभु फिर्ता आउन हामी एक दैनिक आशाले बस्ने, यो एक förväntningens आनन्द र आफ्नो आउँदै लागि तिर्सना दुवै सिर्जना गर्छ।
आषा दुलही तयार रही र एक पवित्र जीवन बिताउन, र आफ्नो अर्को दुलहा तोकिएको बनाउँछ। यो पनि प्रभु प्रेम र सुरक्षित शक्ति पुग्न चाहन्छ जो एउटा हराएको मानवता लागि आवश्यक सिर्जना गर्छ। यो एक राम्रो पाहुना र भौतिक यो तिनीहरूले परमेश्वरको बिना र आशा बिना सदाको जान हजारौं हरेक दिन अनुभव कि आध्यात्मिक वास्तविकता को सम्बन्ध मा कम मतलब बनाउँछ।
एउटै अवधि मा, लेट 1800 का, प्रभु फेरि एउटा सम्बन्धित र्याप्चर को शिक्षण खडा गर्दा मा, विश्व आज इतिहास सबैभन्दा ठूलो मिसनरी र evangelization पटक एक अनुभव। साथ भविष्यसूचक वचन जीवित भए संग, विश्व भर सुसमाचार आगो जलाए।
थिस्सलोनिकीका चर्च अक्षरहरू पावलको eschatological पत्र छ। हामी पावलले त्यसैले दुवै सिकाउँछन् आशा र महत्वपूर्ण घटनाहरू र्याप्चर, एटिक्राईष्ट performanc र कष्ट उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ।
2 थिस्सलोनिकी पनि सबैभन्दा विवादास्पद को NT मा, सम्बन्ध मा समय बिन्दु परमेश्वरको चर्च को र्याप्चर लागि पत्र को एक हो।
एक उदाहरणीय इलाकाका
थुप्रै तरिकामा मण्डलीको अन्य विश्वासीहरूलाई लागि उदाहरण (1 थिस्सलोनिकी 1: 8)। यो कि प्रभुको फिर्ती स्थिर आशाले बस्थे एक चर्च थियो। तिनीहरूले मूर्तिहरू पश्चात्ताप, र (1 थिस्सलोनिकी 1:10) स्वर्गबाट ​​येशू प्रकाश अहिले पर्खेको थियो।
पावलले बाहिर तिनीहरूले प्रभु (: 11-12 4) मा प्रतीक्षा थिए एकै समयमा, एक सामान्य जीवन आफ्नो जब बोक्न र बाँच्न जारी विधानसभा आग्रह कि आफ्नो पहिलो पत्रमा। उहाँले हामी मृत जीवित को र्याप्चर संग साथ खडा गर्दा फेरि पहिले नै हामीलाई अघि घर गएका छन् जो प्रियजनहरूलाई, देख्ने हामीलाई बताएर पनि तिनीहरूलाई सान्त्वना दिन्छ।
पावलको दोस्रो पत्र पहिलो भन्दा बारेमा छ महिना पछि लेखिएको छ। उहाँले ठीक र गलत अफवाहहरु र विधानसभा मा पकड लिएका थिए कि झूटा शिक्षा सच्याउन क्रममा चर्च लेख्छन्।
मण्डलीको प्रभुको दिन सन्दर्भमा, र दुनिया भर आउनेछ कि domstid संग डराउने र भ्रमित थियो। झूटा अफवाहहरु र कथित पत्र पावलले देखि, अब तिनीहरूले कष्ट पनि छ जो यस domstid भित्र पहिले नै थिए मण्डलीको लाग्यो।
2 थिस्सलोनिकी 2: 1-2 - यो हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट र गर्न आउँदा हाम्रो उहाँलाई जम्मा भइरहेको, हामी तपाईंलाई अचानक आफ्नो धैर्य गुमाउन वा, परेशान गर्न न कुनै आत्मा वा शब्द वा सोध्न, दाजुभाइ, पत्र, हामीलाई बाट हुन र प्रभुको दिन आएको छ कि आधारित छ गर्न purporting।
1 थिस्सलोनिकी 5:2- समय र मौसम, भाइहरू, हामी तपाईंलाई लेख्न आवश्यक छैन भने। तपाईं प्रभुको दिन रात चोर रूपमा आउँछ धेरै राम्रो भनेर थाह छ। मान्छे गर्दा, "शान्ति र सुरक्षा," त्यसपछि तिनीहरूले विनाश रूपमा अचानक दुखाइ एक गर्भवती महिला मार्फत आउछ ग्रस्त, र तिनीहरूले उम्कन छैन। तर तिमीहरू, भाइहरू, छैन अन्धकारमा, त्यो दिन तपाईं चोर रूपमा लाग्नेछन् गर्नुपर्छ भनेर हो।
पहिलो, यो प्रभुको दिन साँच्चै के स्पष्ट गर्न महत्त्वपूर्ण छ। धेरै मानिसहरू प्रतिबद्ध र कष्ट येशूले देखिने फिर्ती को अन्त मा ठाँउ लिन्छ जो सीमित र विशेष 24 घण्टा, दिन रूपमा प्रभुको दिन बुझाउँछ। यसरी प्रभुको दिन र र्याप्चर पर्याय हो र एक मा बाहिर जान्छ मतलब।
जो प्रभुको दिन संग जडान मा र्याप्चर उल्लेख, 2: शायद सबैभन्दा उद्धृत पद बस 1 थिस्सलोनिकी5छ। येशूले जडान एक "रात मा चोर" को रूपमा आउँछ भन्ने नै तरिकामा प्रभुको दिन अक्सर यी दुई घटनाहरु भ्रममा।
तर प्रभुको दिन बताउने केही बाइबल पदहरू को एक समीक्षा यसलाई केवल एक दिन उल्लेख छैन, कि तर संकष्टमा येशूले देखिने फिर्ती र दुवै मिलेनियम कवर न्यायको समयमा देखाउँछ।
योएल 2: 11-20 - प्रभुको दिन धेरै इजकिएल 38-39 मा हामी देख्न नै आक्रमण हो भन्ने विश्वास जो उत्तर देखि शत्रु, एउटा आक्रमण समावेश गर्नुहोस्। धेरै गोग / Magog युद्ध संकष्टकालको पहिलो भाग मा हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छन्।
योएल 3:4- यहाँ येशूको देखिने फिर्ती र राष्ट्रहरूको आफ्नो न्याय बाँधिएको प्रभुको दिन हो।
2 पत्रुस 3: 10-23 - यहाँ प्रभुको दिन येशूको देखिने फिर्ती उल्लेख गरेनन्, त्यसपछि हामी दिन स्वर्गीय शरीर भंग गरिने थाहा छ, र हामी नयाँ स्वर्ग र पृथ्वीमा राज्यको 1,000 वर्ष पछि पहिलो स्थानमा नयाँ पृथ्वी प्राप्त।
रात मा चोर जस्तै
पावलले चकित हुनेछ घटना रूपमा प्रभुको दिन वर्णन, र रात चोर जस्तै। यस संसारमा यो आशा बेला, यो सिर्फ रूपमा अचानक हुनेछ, र रूपमा एक महिला travail हुन्छ र यो संसारमा आफूलाई प्रकट गर्दा नै तरिकामा।
आज येशू ख्रीष्टले मात्र एक NT प्रकाश छ। प्रभुको दिन बस एक OT प्रकाश छैन, तर राष्ट्रका न्याय समय NT मा विस्तृत र विशेष गरी प्रकाश अध्याय 6-19 मा वर्णन गरिएको छ। "प्रभुको दिन" पृथ्वी र आज येशू ख्रीष्टले NT सभा र्याप्चर र स्वर्गमा पिताको अघि तयारी सम्बन्धमा गर्दा पृथ्वीमा मानिसहरूलाई विषयमा।
आज येशू ख्रीष्ट आउँदा, यसलाई येशू आफैले आफ्नो पूर्ण मण्डलीको बल प्राप्त गर्न बादल मा आउनेछ जब दिन एक benämnelse छ।
यस पदको Betydningen पवित्र आत्मा, पेन्तिकोसमा स्वर्गीय मान्छे चयन गरेर आफ्नो काम सुरु मा रूपमा, पूर्ण येशूलाई कि अर्को हुनेछ र यो मान्छे पूर्ण येशू ख्रीष्टको अर्को आज बल बनाउन, स्वर्गीय गर्न आफ्नो मण्डलीको घर ल्याउन छ dwellings - जो यसरी प्रभुको दिन अघि ठाउँ लिन्छ।
प्रभु रिस देखि संरक्षित (Orge)
1 थिस्सलोनिकी 1: 9-10 - द तिनीहरूले हामी तपाईं को प्राप्त थिए कसरी कुरा र तपाईंले मूर्तिहरूबाट परमेश्वरको गरिएका कसरी जीवित र साँचो परमेश्वरको सेवा गर्न र आफ्नो पुत्रलाई स्वर्गबाट, जसलाई परमेश्वरले लागि प्रतीक्षा बाट (ek) क्रोध (orge) हामीलाई सुरक्षित छ जो मरेको येशूबाट उठायो।
1 थिस्सलोनिकी 5:9- परमेश्वरले हामीलाई क्रोध (orge) पीडित नियुक्त गर्नुभयो छैन तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमार्फत उद्धारको प्राप्त गर्न
संकष्टकालको अघि मण्डलीको र्याप्चर लागि पूर्व-trib सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण तर्क को एक, येशूले सुरक्षित र आउन क्रोध देखि आफ्नो चर्च सुरक्षित छ भन्ने छ। (आउन Eng। क्रोध)।
रिस को मूल पाठ मा ग्रीक शब्द Orge छ, र अंग्रेजी अर्थ "संकेत गर्छ, क्रोध, आवेग र सजाय। त्यसैले यो परमेश्वरको क्रोध र सजाय यो पृथ्वीमा खन्याइएको गरिनेछ जब समय छ।
तपाईं छैटौं अघि गरिएको छ कि पछिल्लो छाप मा नजर गर्दा, यो रिस पनि वैश्विक युद्ध, आर्थिक hyperinflation, अनिकाल र भाइरस फैलने परिणाम छ अन्य कुराहरु जो पहिलो पाँच छाप, permeated छ कि हेर्न पनि गाह्रो छैन; जो पृथ्वीको जनसंख्याको एक चौथाई perished कि कारण छ।
को knobs अन्त
Rev 15: 1 - अनि म स्वर्गमा अर्को ठूलो र अद्भुत साइन देखे: सात विपत्तिहरूका सात स्वर्गदूतहरू, पछिल्लो; तिनीहरूलाई परमेश्वरको क्रोध यसको पूरा पुग्छ
धेरै यो रिस परमेश्वरको क्रोध अंश पहिलो प्रकाश को अन्त मा देखिन्छ छ भन्ने विश्वास गर्छन्, तर बाइबल स्पष्ट छ कि पछिल्लो सात विपत्तिहरूका निस्कनु र परमेश्वरको क्रोधको छैन शुरुवात संग। (प्रका 15: 1)
19:15 अप - स्वर्गको होस्टहरूको सेतो घोडा मा उहाँको पछि लागे, र तिनीहरूले सेतो, सफा तन्ना कपडा मा तैयार थिए। र आफ्नो मुखबाट उहाँले संग राष्ट्रहरूले Smite कि गर्नुपर्छ र उहाँले फलाम को एक छडी तिनीहरूलाई शासन गर्नेछ, र उहाँले परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, को fierceness र क्रोध (orge) कोलको tramples, धारिलो तरवार आए
संकष्टकालको अन्त्यमा परमेश्वरको क्रोध पूरा, र येशू पराजित र आरमागेडोनमा आफ्नो शत्रुहरू विजय जीत आउँदा हामी अन्तिम समय को लागि यो मुठभेड।
चर्च अन्त गर्न सुरुदेखि यो domstid देखि संरक्षित भइरहेको को प्रतिज्ञा छ भने, त्यसैले यसलाई कि चर्च पहिलो छाप भाँचिएको छ जब पृथ्वीमा रहन सक्दैन एकदम स्पष्ट छ। उहाँले पहिलो यो domstid पृथ्वीमा हुनेछ अघि उत्पन्न गर्नुपर्छ भनेर घटनाहरूको बारेमा सिकाउँछ जहाँ पल,2थिस्सलोनिकी यो पछि पुष्टि गर्छ।
प्रकाश 3:10 - तपाईं धीरज बारेमा मेरो वचन पालन गरेका छन् किनभने, म राख्न र सारा संसार मा आउन र परीक्षण गर्न आफ्नो मान्छे ल्याउन पर्छ जो परीक्षाको घडी, तपाईंले बचत हुनेछ।
थिस्सलोनिकीका चर्च पनि प्रकाश मा मा फिलाडेल्फिया चर्च थियो यस्तै प्रतिज्ञा दिइएको थियो।
तिनीहरूले धीरज बारेमा प्रभुको वचन पालन थिए किनभने, प्रभु (ओक देखि बाहिर) परीक्षण को घण्टा पृथ्वीमा आउन भनेर को Township संरक्षण हुनेछ। (Ek) "बाट" शब्द 1 थिस्सलोनिकी 1:10 प्रयोगका रूपमा नै शब्द छ, र त्यो चर्च देखि फिर्ता लिया हुनुपर्छ, कि र गर्दा prövelsens देखि टाढा देखाउँछ।
मा फिलाडेल्फिया प्रभु चर्च को प्रतिज्ञा मात्र परमेश्वरको क्रोधको समय प्रतिबन्ध लगाएको, तर प्रतिज्ञा सभा परीक्षण को सम्पूर्ण घण्टा पृथ्वीमा आउनेछ जो देखि संरक्षित गर्न।
Apostasia - अपशिष्ट वा प्रस्थान
2 थिस्सलोनिकी 2:3- कुनै एक तपाईं कुनै पनि तरिकामा धोका गरौं। लागि, पहिलो, आउन पर्छ फोहोर र अराजकता को मानिस, perdition छोरा, खुल्लमखुल्ला अगाडि आउन
पावलले चर्च तीन महत्वपूर्ण घटनाहरू हुनेछ अघि प्रभु (संकष्टकालको) को दिन आउनेछ भनेर आशा गर्न सकेन अर्थात् कि, एउटा महत्त्वपूर्ण र निर्णायक तर्क बारेमा मण्डलीको सिकाउँछ:
यो फोहोर (apostasia), आउन पर्छ फिर्ता धारण गर्ने साइट आउन पर्छ, र मानिस laglösthetens एक (एटिक्राईष्ट) खुल्लमखुल्ला अगाडि आएका छन् (प्रका 6: 1)
शब्द apostasia को अर्थ
ग्रीक शब्द फोहोर, षड्यन्त्र अनुवाद गरिएको छ र विद्रोह शब्द "apostasia" छ। को संज्ञा "apostasia" जसको huvudbetydning "सार्दा" छ वा क्रिया "afistämi" आउँछ "अर्को एक ठाउँ बाट केहि सार्न।" शब्द विशेष एक ठाउँमा अर्को कुनै पनि सार्ने जडानमा प्रयोग गरिन्छ, वा यसलाई दूर जान्छ वा कसैले फरक छ भने।
हामी प्रेरित 21:21 मा यसको बारेमा "त्याग्न मोशा," वा धर्मत्याग मोशाले देखि वार्ता कहाँ कहाँ अन्य छ NT, दुई पटक मात्र शब्द apostasia पाउन। को संज्ञा apostasia को NT मा दुर्लभ हुँदा, त्यहाँ क्रिया शब्द पन्ध्र पटक उत्पन्न भएको छ कि afistämi छ। तीन अवस्थामा मात्र यो धार्मिक धर्मत्याग बुझाउँछ। (1 Tim.1, हिब्रू 3:12 र2तिमो 2: 9)।
बाँकी बाह्र अवस्थामा afistämi ", टाढा सार्न" यो एक व्यक्ति छ कि छैन भनेर गर्छ (लूका 4:13; प्रेरित 12:10) देखि अधर्म मन्दिरबाट (2 तिमोथी 2:19), (लूका 2:37) वा शरीर देखि (2 कोरि 12: 8)।
"Apostasia बरफ को एक सम्भव प्रतिपादन: प्रस्थान (चर्च को) को अंग्रेजी बाइबललाई परिलक्षित बाइबल मा, वहाँ एक पादटिप्पणी छ।
आफ्नो 1394 देखि पहिलो सात अंग्रेजी अनुवाद - 1608, सबैले र्याप्चर उद्देश्य शब्द "प्रस्थान" (प्रस्थान) द्वारा अनुवाद भएको थियो। धेरै पहिले अनुवाद एक प्रस्थान को सट्टा शब्द बर्बाद प्रयोग रूपमा राजा जेम्स संस्करण कि यो कस्तो छ?
1576 अंग्रेजी मा क्याथोलिक अनुवाद पनि "Rheims बाइबल" भनिन्छ आए। यो प्रस्थान (प्रस्थान) शब्द सट्टा बर्बाद प्रयोग गरेको पहिलो अनुवाद थियो।
Kotolikerna को "बर्बाद" सुधार मार्फत 1500 का preceded भनेर दर्शाउन यो अनुवाद गरिन्छ।
Conversely, 1611 मा क्याथोलिक चर्च र महान् धर्मत्याग रूपमा यसको शिक्षा गर्न दर्शाउन बर्बाद प्रस्थान देखि अघिल्लो अनुवाद गर्न राजा जेम्स बाइबल प्रकाशित भएको थियो जब संशोधित अनुवादकहरू तिनीहरूले। यसलाई यसरी अध्ययन वा क्याथोलिक चर्च यो निर्णय गर्ने शब्द apostasia को अर्थ, तर जो निर्देश थिएन।
को र्याप्चर - एक विशिष्ट कार्यक्रम
उहाँले बस कष्ट अघि हुनेछ भनी विशिष्ट घटना बारे सिकाउँछ के ठीक पावलले गर्छ?
ग्रीक apostasia अर्थात् एक निश्चित लेख (सामान्यतया छैन ग्रीक शब्द हो जो) पावलले एक विशेष predetermined घटनामा पोइन्ट, र समय हुन्छ भन्ने कुरा बनाउँछ भन्ने छ।
धेरै पदहरू बोल्न र अन्तिम दिनमा धर्मत्याग बारेमा पुष्टि। (1 तिमो 4: 1-2,2घन्टा 3: 1, 1 यूहन्ना 2: 1)। समस्या यी पदहरू को कुनै पनि विशिष्ट बर्बाद वा विशिष्ट घटना हाइलाइट गर्न र अन्त समयमा सबै विश्वासीहरू लागि स्पष्ट चिन्ह हुन लागि समर्थन प्रदान गर्दछ भन्ने छ। पछिल्लो दिनमा धर्मत्याग कुरा सबै बाइबल पदहरू सामान्य छ र एक विशिष्ट कार्यक्रम गर्न दर्शाउन छैन। हामीलाई थाहा छ, यो सबै समय को प्रभु विरुद्ध बर्बाद र विद्रोही सट्टा थियो। यहूदा पनि पहिले नै प्रेषितहरूको समयमा भयो बारेमा बताइएको छ। (यहूदा V 17 एफएफ)
र्याप्चर तथापि, एक निश्चित घटना हो, र लामो अवधिको हुँदैन भन्ने कुरा। यसलाई अन्त पटक र निष्कर्षमा पुगेको छ भनेर देखाउँछ कि एक अद्वितीय वर्ण हुनेछ।
2 थिस्सलोनिकी 2: 6-7 - तपाईं यसलाई आफ्नो समय आउँछ जब उहाँले मात्र निस्कनु सक्छन् अब उसलाई रोकिराखेको जस्तै के थाहा छ। पहिले नै, अराजकता को रहस्य संचालित। अब यसलाई फिर्ता धारण जसले मात्र बाटो बाहिर खाली गरिनेछ।
पद नै अध्याय को 4-8 एटिक्राईष्ट, र उहाँले आफ्नो समय छ देखा पर्न सक्छन् भनेर त्यसलाई फिर्ता धारण गर्ने एक discloses। आज हामी लेख्न 2014, र हामी यो पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ वा उहाँले जो फिर्ता धारण एटिक्राईष्ट अझै अगाडि आएको छ छैन जब अझै पनि यहाँ छ।
व्याकरण को फेरि दुवै "यो" र "उहाँले" को रूपमा वर्णन समाउँदै हुन्छ। पवित्र आत्मा शब्द आत्मा शब्द कुनै सेक्स मा एक शब्द छ जो ग्रीक, मा "pneuma" छ। पवित्र आत्मा पनि छ कि परमेश्वरले एकै समयमा, त्यो एक "उहाँले" को रूपमा वर्णन गरिएको छ। त्यहाँ रोकिराखेको के एटिक्राईष्ट मा धेरै guesses भएको, तर दुवै पुरुष पवित्र आत्मा भन्दा कुनै अन्य हुन सक्छ गर्दा तटस्थ छन् कि छ।
चर्च मा पवित्र आत्मा
पवित्र आत्मा राम्ररी चर्च जोडिएको छ, र APG अध्याय2GT मा मा पेन्तिकोसको दिन पृथ्वीमा पनि पवित्र आत्मा देखिन्थ्यो देखि गरिएको छ, तर बरु आधार शीर्ष। बस उहाँले कष्ट मा के हुनेछ रूपमा।
पवित्र आत्मा संकष्टकालको मानिसहरूको काम जारी, तर माथिबाट uppryckelsens क्षण देखि हुनेछ। तसर्थ, हामी पवित्र आत्मा प्रकाश को र बाहिर किताबको अध्याय3प्रतिनिधित्व अब हेर्नुहोस्। सात चर्च गर्न पत्र मा, हामी यी शब्दहरू सुन्न: कान छ जसले, उहाँलाई आत्मा मण्डलीलाई के भन्छ सुन्न गरौं।3अध्याय, विधानसभा गरेको र्याप्चर छ अब बोल्छ जसले पवित्र आत्मा छ पछि। प्रकाश 13:9- जसले कान छ, उहाँलाई सुन्न गरौं। न त भन्ने कष्ट मानिसहरूलाई विभिन्न मुक्तिको र न्यायको सन्देश आउँछ पवित्र आत्मा छ, त्यसपछि यसलाई सट्टा स्वर्गदूतहरूले हुनेछ। (प्रका 14: 6-7)।
सम्मेलन पवित्र आत्मा समातिए हुँदा थप देखि काम गर्न सभा आज परमेश्वरको थाह छ कि मात्र मन्दिर छ त कुनै ठाउँ छ। (1 3:16)। संकष्टकालको मा प्रतिनिधित्व छ कि मात्र चर्च skökoförsamlingen छ, र पवित्र आत्मा वा बाहिर बाट सञ्चालन गर्छ नहुन सक्छ।
2 थिस्सलोनिकी 2:13 मा र्याप्चर
2 थिस्सलोनिकी 2:13 - तर हामी परमेश्वरको शुरुवात सत्यको आत्मा र विश्वास को पवित्रीकरण उद्धारको लागि तपाईंले रोजेको परमेश्वरको किनभने, तपाईं प्रभुको प्रिय भाइहरू लागि सधैं धन्यवाद गर्न बाध्य छन्।
ENG ट्रान्स। "तर हामी तपाईं को लागि सधैं परमेश्वरको धन्यवाद गर्नुपर्छ, प्रभु द्वारा प्रिय भाइहरू, किनभने तपाईं छनौट राम्रो, पहिलो फल, सत्य आत्मा र विश्वास पवित्रीकरण द्वारा छुटकारा लागि।"
यो पद जडानमा उल्लेख गर्न महत्त्वपूर्ण छ भनेर पहिलो कुरा यो यी eschatological पत्र को जडान मा उल्लेख शिक्षालाई discloses छ छ "प्रभुको दिन।"
को antecedent अध्याय (अध्याय 2) पावलले थियो बस पहिलो खुल्लमखुल्ला प्रस्तुत अगाडि आउन पर्छ जो अराजकता को मानिस, बारे मण्डलीको सिकाउनुभयो। हामी एटिक्राईष्ट पहिलो छाप मा निस्कनु हेर्नुहोस्, र जब सेतो घोडा जस्तो देखिन्छ।
यसलाई पावलले यस पदमा व्यक्त कि मुक्तिको लागि यो कृतज्ञता, एउटै मुक्तिको उहाँले tantly परमेश्वरको क्रोध खुलासा दुई पत्र सिकाइएको छ कि भनेर हुन सक्छ? यस मामला मा, यो अझै सभा को पावलको आवर्तक विषय, अर्थात् प्रभुको बचत र परमेश्वरको क्रोध र कष्ट को संरक्षण को अर्को पुष्टि हो।
मुक्तिका हुन चयन
मुक्तिको (soteria) को यो शब्द बुझ्न पावलले प्रयोग, तपाईं पनि उहाँले मा संकेत समय अनुसार यसलाई व्याख्या छ।
शब्द मुक्ति (। GR Soteria) ENG निम्न अर्थ छ; deliverence, संरक्षण, सुरक्षा, मुक्तिको: शत्रुहरूको molestation देखि छुटकारा।
शब्द पुरानो नियममा प्रयोग गरिन्छ देखि, हामी देख्न सक्छौं कि शब्द परिवर्तन अर्थ, अगाडी अगाडी हामी समयमा सापेक्ष अक्षरहरू लेखिएका थिए जब हुनेछ।
पुरानो नियममा मुक्तिको
यस अतिरिक्त, हामी शब्द 78 पटक फेला पार्न र अक्सर Yeshu'ha हिब्रू शब्द सम्बन्धित छ। शब्द पुरानो नियममा प्रयोग गरिएको छ पटक को बहुमत, दुश्मन वा इजरायल लागि अस्थायी परीक्षा देखि एक शारीरिक मुक्तिको जोडिएको छ।
तिनीहरूले लाल समुद्र पार गर्दा हामी मिश्र, यहाँ, इस्राएललाई छुटकारा लागि अरूलाई बीचमा यो हेर्नुहोस्। जब दाऊद उद्धार र शाऊलको सतावट मुक्त, र पलिश्तीहरूलाई, मोआबीहरू र Edomites जस्तै प्राकृतिक शत्रुबाट इस्राएलका मुक्तिको यो पनि प्रयोग गरिएको छ।
यशैया मसीहको फिर्ती मा इस्राएलको उद्धार वर्णन गर्न दुवै, तर पनि आध्यात्मिक र प्रभु इस्राएलका संग स्थापना नयाँ करार वर्णन गर्न यो शब्द प्रयोग गर्दछ।
को NT मा मुक्तिको
नयाँ नियममा शारीरिक दुवै खतरा प्रयोग शब्द "Soteria" छ (प्रेरित 7:25, 27:34), तर हामी क्रूसमा येशूको मृत्यु मार्फत प्राप्त गरेको आध्यात्मिक मुक्तिको वर्णन सबै माथि। (फिलि 1:28,2कोरिन्थी 7:10 Efe 1.13)
हामी यो शब्द को अर्थ दुवै आध्यात्मिक मुक्ति र अस्थायी खतरा वा परिस्थितिमा एक शारीरिक मुक्ति हुन सक्छ कि देख्न सक्छौं। को NT को बहुमत आध्यात्मिक मुक्तिको एक अर्थमा लागि खडा गर्दा GT ज्यादातर एक शारीरिक खतरा छ।
थिस्सलोनिकीहरूलाई को समय
नयाँ नियममा, 60 वर्ष को एक अवधिमा लेखिएको थियो फरक लेखक द्वारा। शब्द मुक्ति (soteria) को अर्थ यो लेखिएको थियो समय गर्न व्याख्या गर्न सकिँदैन दुवै सम्बन्ध, र जो मार्फत लेखक शब्द प्रयोग।
पावलले 20 वर्ष को एक अवधिमा आफ्नो पत्र लेखे, र यो शब्द समय यसको महत्त्व केही परिवर्तन undergoes कि त्यसैले प्राकृतिक छ। रोमीहरूलाई पावलको पछि पत्र केही गर्न यसको विपरीत, जहाँ शब्द लगभग सधैं आध्यात्मिक मुक्तिको महत्व प्रयोग गरिएको उदाहरण को लागि, थिस्सलोनिकीका, पावलको पुराना अक्षरहरू को एक पत्र छ।
पावलको पहिले पत्र
थिस्सलोनिकीका र गलातीयामा पावलले प्रारम्भिक अक्षर अक्षर मा, कहिल्यै आध्यात्मिक मुक्तिको व्यक्त गर्न शब्द 'Soteria' प्रयोग। शब्द पनि छैन जो पनि चर्च को इतिहास मा एक प्रारम्भिक चरण मा लेखिएको छ जेम्स छ। 6, "Dikaio-ँ" गला 2:16, "exagorazo" गला 3:13 आदि: पावलले सट्टा अर्को शब्दमा यस्तो "kaleo" गला 1 रूपमा आध्यात्मिक मुक्तिको वर्णन गर्न यो समय समयमा, प्रयोग
शायद थिस्सलोनिकीहरूलाई अक्षरहरू पछि लिखित पत्र 1 जहाँ शब्द "Soteria" कहिले पनि प्रयोग कोरिन्थी थियो। यो पावलको दोस्रो कोरिन्थी शब्द मा चर्च पत्र फेरि प्रयोग मा मात्र हो। यहाँ प्रयोग शब्द तीन पटक, र हामी पहिले आध्यात्मिक उद्धारको जडान प्रयोग शब्द हेर्न जब कि छ।
जस्तो पावलले आफ्ना प्रारम्भिक अक्षर यो शब्द प्रयोग गर्दा, उहाँले अझै पनि GT शारीरिक वा अस्थायी खतरा वा परिस्थितिमा एक मुक्तिको विवरण यस शब्द प्रयोग गर्दछ, र यसरी बाटो प्रभावित छ जस्तो देखिन्छ। पावलले पछि अक्षरहरू यो शब्द प्रयोग गर्दा आध्यात्मिक मुक्तिको बहुमत betydning छ।
विषय मार्फत Brevens
1 र2थिस्सलोनिकी प्रत्येक अध्याय कुनै पनि येशूको फिर्ती अर्थ खुलासा, र पावलको eschatological शिक्षा। त्यसैले यसलाई पावलले2थिस्सलोनिकी 2:13 मा गर्न पनि discloses बुझाउँछ र विषय को एक निरंतरता छ कि यो मुक्तिको पावलले सिकाउँछ विश्वास गर्न सम्बन्धित अन्य शब्दहरू छ।
2 थिस्सलोनिकी अध्याय2को एक समीक्षा अध्याय प्रदान गर्दछ भनेर देखाउँछ:
1 चेतावनी (पद 1-3)
2. apostasia (पद 3)
3. कानूनको पालन नगर्ने एक उभर (पद 3-5)
4 फिर्ता पकड (पद 5-7)
5 एटिक्राईष्ट performanc र आगमन (पद 8-9)
6 भ्रम र मान्छे को छलछाम (पद 10-12)
7 एक धन्न प्रभु, र एक कल (पद 13-15)
पावलले लेख्ने अनुगामी र परमेश्वरको तयार छ कि मुक्तिको लागि प्रभु आफ्नो कृतज्ञता व्यक्त गर्दा, यो नै अध्यायमा आफ्नो पहिले निर्देशन प्रकाश मा देखेको हुनुपर्छ। अर्को शब्दमा, छैन पावलले लागि धन्यवाद बोल्न वा दिन सुरु गर्ने एक नयाँ विषय हो, तर केवल एक विषय अरू लडी उहाँले पहिले नै पत्र भर सिकाउनुभयो।
हाम्रो भविष्य महिमा
2 थिस्सलोनिकी 2:14 - यो तपाईं हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमा जीत सक्छ, के परमेश्वरले हाम्रो सुसमाचार तपाईंलाई भनिन्छ छ छ
अर्को पद हामी2थिस्सलोनिकी2मा पूरा ख्रीष्टमा हाम्रो भविष्य महिमा बताइएको छ। यसलाई जहाँ "को perishable, impermanence धारण गर्नुपर्छ" र पावलले 1 कोरिन्थी मा बताइएको छ कि महिमा छ "यो नश्वर अमरता धारण गर्नुपर्छ।"
त्यसैले यो प्रभु उहाँलाई आफ्नो मण्डलीको खींचती गर्दा क्षणमा होता, आज uppryckelsens एक सन्दर्भ र हाम्रो भविष्य महिमा छ, र उहाँले तिनलाई जस्तै हाम्रो शरीर रूपान्तरणहरूलाई। यो पद पद बाह्र को एक निरंतरता छ, र uppryckelsens दिन एउटा स्पष्ट लिङ्क हो।
पावलले प्रभु वा कष्ट दिन हुन सक्छ अघि, कानूनको पालन नगर्ने एक (एटिक्राईष्ट) अगाडि आउन छ भन्नुहुन्छ। तर लागि एटिक्राईष्ट, सक्षम अगाडि आउन हुनेछ उसलाई फिर्ता को (पवित्र आत्मा) छेउमा आउन पकड हुनुपर्छ, र पवित्र आत्मा गर्न पहिलो सभा लगिएको छन् हुनुपर्छ र पृथ्वीबाट गएका हुन सक्षम साइट आउन हुन।
यो पृथ्वीमा उहाँको देखिने फिर्ती पालना गर्न धेरै वर्ण येशूले अंक। तर र्याप्चर एक अहस्ताक्षरित घटना हो, र सभा कल एटिक्राईष्ट वा इजरायल आफ्नो करार लागि प्रतीक्षा छैन, तर "आफ्नो पुत्रलाई स्वर्गबाट ​​लागि प्रतीक्षा गर्नुहोस्।"
हामी प्रभु चाँडै आउने र हामीलाई आउन क्रोध हामीलाई सुरक्षित घर प्राप्त, र हामीलाई सधैंभरि उहाँको हुन लागि स्थिर आशाले बाँचिरहेका छौं।
येशूले चाँडै आउँदै छ!